जुन महिनामा कोरियामा बाल जन्मदर सबैभन्दा कम ! – Kantipur Press
जुन महिनामा कोरियामा बाल जन्मदर सबैभन्दा कम !
दक्षिण कोरियामा बच्चा ज’न्माउनेहरुको संख्या घ’ट्दो छ। यहाँ विवाहको दर पनि क’म रहने गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षको जुन महिनामा कोरियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा क’म ब’च्चा जन्मिएका छन। न्यू’न ज’न्मदरका का’रण अहिले कोरियामा जनसंख्या घ’ट्न थालेको देखिएको छ। यसलाई कोरियाले एउटा राष्ट्रिय स’म’स्याकै रुपमा लिएको छ।
जुन महिनामा दक्षिण कोरियामा २१ हजार ५ सय २६ बच्चा ज’न्मिएका छन। कोरियाको तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो संख्या गत बर्षको यसै महिनाको तुलनामा २.७ प्रतिशतले क’म हो। जुन महिनामा ज’न्मिएको २१ हजार ५ सय २६ जना सन १९८१ देखि यताकै सबैभन्दा क’म हो। सन १९८१ देखि कोरियाले जनसंख्या सम्बन्धि तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेको थियो।
चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासमा कोरियामा नयाँ ज’न्मेका बच्चाहरुको संख्या ६६ हजार ३ सय ९८ रह्यो। यो संख्या पनि गत बर्षको यसै अवधिको तुलनामा २.७ प्रतिशतले क’म हो। दक्षिण कोरिया अहिले नि’रन्तर ज’न्मदर घ’ट्ने सम’स्याबाट पि’डि’त रहेको छ। ज’वान युवा यु’वतिहरु विवाह गर्न उ’त्सुक नदे’खिनु तथा आर्थिक म’न्दिका का’रण पनि उनिहरु ब’च्चा ज’न्माउन हि’च्कि’चाउने गरेका छन।
कोरियाको कुल मा’तृदर अर्थात एक महिलाले आफ्नो जि’वन अवधिभर औषतमा ज’न्माउने ब’च्चाको दर गत बर्ष अहिले सम्मकै ब’सैभन्दा क’म अर्थात ०.८४ रहन पुग्यो। कुल मा’तृदर लगातार ३ बर्षदेखि १ भन्दा त’ल र’हेको छ। कोरियामा अप्रिल जुन महिनाको अवधिमा कुल मा’तृदर ०.८२ रह्यो। यो दर गत बर्षको यसै अवधिमा ०.८५ रहेको थियो।
कोरियामा जनसंख्या जुन महिनामा २ हजार ८ सय ६५ जनाले घ’टेको छ। कोरियामा गत २० महिनादेखि जनसंख्या लगातार रुपमा घ’टिरहेको छ। सन २०२० बाट कोरियामा पहिलो पटक प्राकृतिक रुपमा जनसंख्या घ’ट्न थालेको हो। कोरियाका विज्ञहरुले सन २०३० देखि ३० भित्रमा जनसंख्या क’मिका का’रण कामदार अ’भा’वको स’म’स्या भो’ग्नुपर्ने बताइरहेका छन।eps sathi
कोरियाली रोजगारको प्रक्रिया खुलाउन महत्वपुर्ण प्रयत्न गर्ने महानिर्देशक दवाडीले लिए अवकाश!
कोरियाले आफैंले बनाइरहेको पहिलो रकेट यहि अक्टोबरमा प्र’क्षेपण गर्दै